पटक पटक से;क्स गर्न मन लाग्नुको कारण के ? एक रातमा कति पटकसम्म गर्दा पुग्दैन हानी ? – Gazabkonews
पटक पटक से;क्स गर्न मन लाग्नुको कारण के ? एक रातमा कति पटकसम्म गर्दा पुग्दैन हानी ?
हामीले मानव यौ* न प्रतिक्रिया चक्रलाई केलाएर हेर्‍यौं भने त्यसमा प्राप्त हुने सु-खलाई स्व-र्गीय सु-ख भनिन्छ, त्यसैले यसलाई च-रम-सुख नै नाम दिइएको छ । भनिन्छ, यो मानवले प्राप्त गर्ने सुखहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम सुख हो । त्यसैले यो स्वाभाविक हो कि कुनै पनि व्यक्ति यस्तो सुख प्राप्त गर्न लालायित हुन्छन् । उसले सो सुख पुन: प्राप्त गरेमा उसले सो सुख फेरि पनि प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छ र यसले निरन्तरता पाउँछ ।
यो कसरी सञ्चालित हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा पनि एकपल्ट नियालेर हेरौं । यस्ता प्रक्रियालाई सञ्चालन गर्ने पुरस्कार प्रणाली भनिन्छ । यो प्रणालीले हामीलाई सुख वा आनन्द दिने कुरा तिर निरन्तर आकर्षित गर्छ त्यो खाना, न-शा-लु वस्तुको प्रयोग होस् वा यौ-नस-म्पर्क । त्यसैगरी दु:ख वा पीडादायक कुराबाट टाढा बस्न लगाउाछ । यस क्रममा हाम्रो मस्तिष्कको विभिन्न भागबाट हुने कार्यको संयोजनको कार्य भने भन्ने भागले गर्छ ।
यो प्रक्रियामा D9op9amine भनिनेको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कुनै आनन्ददायी क्रियाकलापभन्दा पहिले जति बढी मात्रामा Dopamine मस्तिष्कमा निस्कन्छ त्यति नै बढी आनन्द प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसको केही मात्रामा अनुभव भए पछि, मस्तिष्कमा स्मृति बन्दछ र यही स्मृतिको आधारमा हामीले केही निश्चित क्रियाकलाप आनन्ददायी हुने अपेक्षा गर्छाैं । हामीले प्राप्त गर्ने आनन्द हाम्रो शरीरमा प्राकृतिक रूपमा नै हुने यउष्यष्मक को कारणले प्राप्त हुन्छ । Dop9amine निस्किए पछि O9pi9oids निस्कन्छन् ।